Peñalba de Santiago, tanàna nijanona ara-potoana | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | Fialan-tsasatra
Peñalba de Santiago dia iray amin'ireo tanàna toa misy ireo nijanona ara-potoana. Any amin'ny iraika ambin'ny folo metatra ny haavony eo afovoan'ny tendrombohitra ny Faritra Bierzo, ao amin'ny faritanin'i León, ny fisehoany medieval dia nahazoany fanekena tsy misy farany.
Nanomboka tamin'ny 2008 dia Fananana tombotsoan'ny kolotsaina ao amin'ny sokajy Ethnological ensemble ary koa ao amin'ny tambajotran'ny Vohitra tsara tarehy indrindra any Espana. Raha tianao ny karazana fizahan-tany hafa noho ny an'ny agglomerations lehibe, manasa anao izahay hankafy ny hatsarana sy ny fiadanan'i Peñalba de Santiago.
1 Inona no ho hita sy tokony hatao any Peñalba de Santiago
1.1 Trano nentim-paharazana
1.2 Ny fiangonan'i Santiago de Peñalba
1.3 Ny manodidina an'i Peñalba de Santiago
2 Inona no hohanina ao an-tanànan'i Bercia
3 Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any Peñalba de Santiago
4 Ahoana ny fomba hahatongavana any Peñalba de Santiago
Inona no ho hita sy tokony hatao any Peñalba de Santiago
Ny tanàna dia naorina avy amin'ny monasitera nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary tsy misy intsony ankehitriny. Ao amin'ny tranonkala nozanahiny, dia mbola afaka mahita trano hanamboarana ny vato sokirany sy ny marbra. Saingy ny fahitana ny tanàna an-tanàn-dehibe iray manontolo ao Peñalba.
Ny tena manintona ny tanànan'i Leonese dia ireo trano manintona. Mamaly izy ireo maritrano nentim-paharazana an'ny Bierzo. Izy ireo dia mahitsizoro amin'ny endrika, na dia boribory aza ny zorony indraindray, ary namboarina tamin'ny fampiasana akora fototra izy ireo bato ny faritra.
Roa ihany koa izy ireo matetika. Ny rihana tany ambany dia namboarina ho tranon'omby, trano fitehirizam-bokatra ho an'ny fitaovam-piompiana ary famiazam-boaloboka. Ho an'ny ampahany, ny rihana voalohany dia ny trano ihany. Ary mahazatra azy io a lalantsara na lavarangana cantilevered, matetika vita amin'ny hazo ary indraindray rakotry ny hazo fisaka mba hisorohana ny hatsiaka.
Trano mahazatra an'ny Peñalba de Santiago
Misongadina ny tanàna Trano fahafolonkarena, antsoina izany satria teo no nitahirizana ny ampahafolon'ny zavatra nojinjain'ny tantsaha mba halefa any amin'ny Episkôpikan'i Astorga ho fanomezam-boninahitra.
Na izany na tsy izany, ho fahafinaretana ho anao ny mandeha amin'ny arabe tery sy miolikolika ao Peñalba de Santiago, ary tamin'izay fotoana izay dia toa nijanona ary tsy dia tsara tarehy loatra.
Ny fiangonan'i Santiago de Peñalba
Na izany aza, ny tsangambaton'ny tanànan'i Leonese dia ny fiangonan'i Santiago de Peñalba, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary mamaly ilay antsoina hoe art of repopulation, anarana iray izay nomena tato ho ato ny maritrano mozarabic.
Izy io dia manana drafitra hazo fijaliana latina misy trano fiangonana roa eo am-pelatanany ary koa apses roa, ny iray eo an-dohany ary ny iray eo am-pototry ny hazo fijaliana. Ity fahalianana amin'ny fananana apses roa mifanohitra ity dia a tena tsy fahita firy satria tranga iray ihany no misy ao amin'ny Saikinosy Iberia: ny an'ny fiangonan'i San Cebrián de Mazote, ao amin'ny faritanin'i Valladolid.
Ao anatin'ny tempolin'i Berciano dia azonao atao koa ny mahita singa liana hafa toa ny tandindon'ny astral avy amin'ny Celtic, kely dome galona ny fitaomana arabo ary tohanan'ny soavaly Fomba Visigothic. Ary ho hitanao koa ny sary sokitra sy sary hosodoko an'ny olona sy ny biby. Hatramin'ny 1931, ity fiangonana ity dia Tsangambato ara-javakanto manan-tantara.
Fiangonan'i Santiago de Peñalba
Ny manodidina an'i Peñalba de Santiago
Raha tsara tarehy i Peñalba de Santiago, vao mainka mahavariana kokoa ny manodidina ny tanàna. Tena akaiky an'io ilay lava-bato ao San Genadio, Benedictine tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nisotro ronono ho azy. Io dia ao anatin'ny antso Tebaida Berciana. Ity faritr'i Bierzo ity dia fantatra amin'ny fifandraisany amin'ny faritr'i Egypty ambony izay nahaterahana tany Atsinanana ny fomba amam-panao monastic.
Ity faritany manana tombontsoa ity, izay misy lohasaha samihafa avy any Leon ary koa Peñalba de Santiago, dia nambara Landscape mahafinaritra y Toerana manan-tantara.
Saingy, ankoatr'izay, ny tanàna Bercian dia hita ao amin'ny Lohasahan'ny Fahanginana, kosa novolavolain'ny Tendrombohitra Aquilanos. Angano dia noho ny angano. Ity dia milaza fa, raha mbola nisaintsaina tanteraka i Saint Genadius dia henony ny fimonomononan'ilay renirano Oza ary nanelingelina azy izany. Avy eo dia nasainy nangina izy ary nijanona tsy nitabataba ny rano.
Saingy, ankoatry ny angano, ny zavatra tianao ho fantatra momba ny Aquilanos Mountains dia ny fananan'izy ireo tsara tarehy lalan-tongotra. Misongadina eo amin'izy ireo izy, ilay miakatra amin'ny tendrony indrindra Morredero y Ny lohan'i Mare. Fivoahana avy amin'ny Port of the Portillines ary manana velaran-tany enina amby roapolo kilometatra ka tsy takatry ny rehetra. Fa mahavariana ireo sary manolotra anao.
Inona no hohanina ao an-tanànan'i Bercia
Aorian'ny làlambe an-tendrombohitra toy ny teo aloha dia tsy maintsy mamerina ny batterieo amin'ny sakafo tsara ianao. Ny tanànan'i Leonese mihitsy dia manana maromaro trano fisakafoanana izay manolotra anao ny gastronomy mahazatra an'ny El Bierzo.
Sakafo toy ny botillo, ny hatsarany amin'ny saosisy, izay amboarina amin'ny faritra samihafa amin'ny kisoa ary andrahoina ovy sy chorizo. Avy amin'ity biby ity koa ny androlla. Etsy ankilany, ny azy ireo dipoavatra natsatsika; ny lasopy trout; ny leonesa cachelada, izay ovy misy chorizo; ny berciana pie, izay koa nitetika ovy sy chard voatetika, na ny vilany berciana, izay vita amin'ny legioma sy saosisy henan-kisoa, anisan'izany ny botillo.
Ho an'ny tsindrin-tsakafo dia manana karazana voankazo mahafinaritra toy ny fihaonambe pear na ny paoma pippin. Fa koa mofomamy miaraka amin'ny Mofomamy chestnut Bierzo, ny Mpitety Fiangonana, ny donant bercianas ary ny nutty. Misotro, tsy mila manoro hevitra anao tsara izahay divay avy amin'ny fiantsoana autochthonous fiaviana, iray amin'ireo malaza indrindra any Espana.
Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any Peñalba de Santiago
Araka ny efa nolazainay taminareo, ny tanànan'i Bercia dia sahabo ho XNUMX XNUMX metatra ny haavony. Noho io antony io, amin'ny ririnina dia misy ny oram-panala matetika izay hanasarotra ny fivezivezena manodidina azy. Ary koa, vanim-potoana mangatsiaka be io.
Ny tolo-kevitray dia ny handehananao any Peñalba de Santiago ao lohataona na fahavaratra. Ary tsy izany fotsiny satria tsara kokoa ny toetrandro, fa satria lava kokoa ny andro ary hahafahanao manao zavatra bebe kokoa.
Cave of San Genadio
Ahoana ny fomba hahatongavana any Peñalba de Santiago
Ny fomba tokana handehanana mankany amin'ny tanànan'i Leonese dia amin'ny lalambe. Tsy maintsy miakatra ianao Ponferrada ary avelao eo amin'ny tetezana Boeza ity ary raiso ny lalana mankany San Lorenzo del Bierzo fa amin'ny làlan'ny San Esteban de Valdueza.
Alohan'ny ahatongavan'ity farany dia mila mihodina miankavia ianao amin'ny làlana miampita Valdefrancos y San Clemente. Aorian'ireo dia makà fihaonambe hafa ankavanana izay manondro Tendrombohitra Valdueza ary izany dia hitondra anao mivantana any Peñalba de Santiago.
Ho famaranana, raha te hitsidika tanàna mahafinaritra ianao trano nentim-paharazana ny tendrombohitra Leonese, mankanesa any amin'ny Peñalba de Santiago, miaraka amin'ny fiangonana taonjato faha-XNUMX sy ireo sary an-tendrombohitra mahavariana. Ary, rehefa avy nankasitraka ny hatsarany rehetra, mankafy sakafo tsara mifototra amin'ny gastr gastrikan'ny El Bierzo. Tsy drafitra tsara ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Peñalba de Santiago
Inona no hatao any amin'ny Repoblika Dominikanina